Wax ka baro: 8 arimood oo qayb ka qaadata caafimaad xumada haweenka (Daraasad) – SBC
Wax ka baro: 8 arimood oo qayb ka qaadata caafimaad xumada haweenka (Daraasad)
Posted by editor on November 27, 2012 Comments
Caafimaadka dumarka iyo ragga ayaa siyaabo kala duwan wuxuu ugu xiran yahay hab dhaqanka nolaleed ee labadaasi jinsi, waxaana jira waxyaabo badan oo qayb ka qaata caafimaad xumada hadii aan loo helin xal lagaga waantoobo hab dhaqanka iyo dabeecada qofnimo.
Haween badan ayey caado u tahay inay ku labistaan kabo taako dheer ama qoob dheer xaga dambe ku leh, kuwaasi oo ay u qaataan ha dhisto haykalkaaga qurux, hana u qaado sare habmaamuskaaga labis, taasi waxay ku tahay haweenka hub ay u wataan caafimaadkooda.
Daraasado waxay leedahay haweenka caadada ka dhigta inay kabo qoobab dheer lugaha gashada ay la soo daristo halis caafimaad xumo, gaar ahaan kuwa maalin kasta qoobka ku riixa kabo taako dheer xaga dambe ku leh.
Kabaha ciribta dheer waxay daraasadu xustey inay saameyn ku leedahay toosnaanta qofeed, isla markaana ay cadaadis ba’an ku sameyso kala goysyada xubnaha ama lafaha halka ay isagu yimaadaan.
Waxay kaloo keenaan xanuuno ku dhaca lafaha faraha,suul qalooc, dhabar xanuun, dhaawac gaara faylaha lugaha & waliba hab socodka qofeed taasi oo keenta in taag taagsashada badani ay keento lafo xanuun.
Daraasadu waxay iftiimisay in boorsooyinka cul-culus ee haweenka dadaamiyaan ay waxyeelo u keeni karo luqunta iyo dhabarka, waxaana ay ku bixisay digniin in haweenaydu aanay sugin inta ay la soo darseyso caafimaad xumo, iyadoo looga baahan yahay haweenka inay ka bixiyaan boorsooyinka waxyaabaha aan muhiimka u aheyn ee culeyska keeni kara.
Ku seexashada waxyaabaha la isku qurxiyo
Haween badan ayaa waxyaabo badan oo bilicdooda billa isku qurxiyo kuwaasi oo ay ka mid tahay wajiga oo lagu subko waxyaabo iftiimiya, dhaldhaaliya ama sare u qaada nuurkiisa waana waxa loo yaqaan (Make up).
Daraasadu waxay kaloo xustey in wel-welka iyo safrinta qoomameynta ay u keento haweenka cuduro kala duwan oo ay ka mid tahay Stress-ka iyadoo dhibaato xaga caafimaadka maskax ahaan iyo jir ahaan u soo jiidaysa, taasina waxay dhalisaa in haweenka ay arintan saameyso uu ku dhaco cudurka depression-ka ama isku-buuqa.
Daraasadu waxay daboolka ka qaaday in laba jibaar haweenka ay uga badan yihiin ragga falalka qoomameynta gaar ahaan marka ay timaado burburka ku dhaca xiriirka lamaanaha.
Daraasadu waxay xustey in haweenka jir ahaan aan buurneyn ay aaminsan yihiin 16% in ay buuran yihiin taas oo ah mid saameyn ku yeelan karta isku kalsoonanta qofka.
Baaritaan gaar ah oo ay sameysay shirkada Dove ee sameysa waxyaabaha la isku carfiyo, & kuwa jirka lagu nadiifiyo ayaa sheegtey in 90% haweenka ay wareysiyada ka qaadeen ay qabaan in ay wax uun ka badalaan hab muuqaalkooda, haba ahaatee hal tilaabo, arintaasi oo la sheegay in ay u keento haweenka inay cunto cunida yareeyaan, ama ay ku dhacaan waxyaabo khayral caadi ah oo la xiriira habka cunto qaadashada tiiyoo ay u sii dheertahay qaliimo dhanka jirka ah oo ay doortaan.
Hurdo dhameystiran oo qofka bini’aadamka ah uu helaa waxay qayb weyn ka tahay caafimaadka, hadaba hurdo yarida ama mid aan dhameystireyn ayaa caafimaado xumada haweenka la soo dirista ka mid ah.
Cilmi baaris arinkan la xiriirta oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in haweenku uga nugul yihiin ragga cudurkada ka dhasha hurdo yarida, iyadoo haweenka u keenta xanuuno ay ka mid yihiin wadno xunuun, u dhawaanshaha shilalka iyo hoos u dhac ku yimaada socodka ama wareega dhiiga.
Cilmibaaris arinkan la xiriira oo ay si gaar ah u sameysay Jaamacada University of Michigan ee dalka Mareykanka ku taal ayaa waxay ku ogaatey in cudurada ka dhasha hurdo yarida ama la’aanta hurdo dhameystiran ay haweenku uga badan yihiin ragga.